Semalt Expert: Zvibatsiro ZveWebhu Zvokugadzira Mazano Kwevatengesi
Mazuva ano, mabhizimisi haagoni kupona pasina deta yakabudiswa zvakanaka. Zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuwana dharuro pamusoro pevakwikwi, vatengi, michina, maitirwo, vatsva vasvika uye misika itsva. Nhoroondo iri paIndaneti inobatsira, asi vatengesi vedhijitori vanoona zvakaoma kutora, kubvisa, nekushandisa zvakare data. Nezvishandiso zvakakodzera, zvisinei, hazvisi zvakaoma kuwana mari inobatsira uye inobudirira kwebhizimusi rako rekutsvaga.
Pano tave tichitaura pamusoro pezvikomborero zve web scraping nhepfenyuro ye internet kana vatengesi vevhidhiyo.
1. Kuvimbiswa kwe data yakarurama
Inowanikwa yedhina zvinyorwa zvidhori kubatsira kubvisa tsanangudzo inogadzirika uye yakagadzirika maitiro, kubatsira vatengesi vedhijiti kuita mabasa akawanda. Mazhinji emakambani ekutsvakurudza, mabhizinesi, uye makambani ekudhinda anounganidza dhina manyore pakugadzirira, kutsvakurudza, uye analytics. Kana zvasvika pakushambadzira kwepaIndaneti, ruvara rwekutsvaga ndiyo nzira yakanakisisa, yakavimbika uye yakachengeteka yaunofamba nayo. Vashandi vekutengesa vanofarira kutora ruzivo pamusoro pevakwikwidzana vavo, maitiro ano maitiro, zvakasiyana-siyana nemishandiro. Vanoshandisa ruzivo urwu mukusimudzira, kutengesa uye kugovera zvinangwa. Mhando yepamusoro yemigumisiro inogona kuvimbiswa chete kana iwe uchishandisa zvishandiso zvinovimbika, uye deta yako yakabudiswa inofanira kuva isina kukanganisa uye inoverengwa.
2. Chengetedza nguva uye nzvimbo
Imwe rubatsiro rwe data kana web web scraping services ndeyokuti vanochengetedza nguva yedu yese uye nzvimbo. Nhanho iyo ruzivo runowanika kune vatengesi vepanhau vanogona kuita mutsauko. Kana vakaramba vachinyora deta manyorero, zvinogona kutora nguva yakakwana kuti vawane mhinduro inoda. Asi nezvishandiso sekutumira. io naKimono, vanogona kuchengetedza nguva yavo nesimba uye vanogona kupedza maawa pane chimwe chinhu kunze kwekuchera deta. Nokudaro, isu tinogona kutaura kuti web scraping zvirokwazvo ndiyo inowanikwa kune vatengesi nevatongi.
3. Ramba Wakakwikwidza
Kubata simba rekuziva kunokosha mukushandurwa. Zvakavimbika uye zvinokurumidza zvinowanikwa pamitengo uye kuwanikwa kwezvigadzirwa nemashandiro epaIndaneti zvinogona kukosha zvikuru kune e-commerce nzvimbo, vatengesi vepaIndaneti, uye vatengesi vepanhau. Kunyange makambani eFMCG anoda kuunganidza data kubva pamapeji akasiyana ewebhu. Vashandi vekutengesa zvino vanoshandisa deta iyi kuti varambe vachikwikwidzana, kune zvinangwa zvekusimudzira uye vanotarisira nhamba yakawanda yevatengi munyika yose.
4. Shandisa mavhesi
Maminitsi ose, World Wide Web inogadzira zvinyorwa zvemadhora zvemashoko. Transactional data, data yebhizimusi, deta yedunhu uye data yehupfumi yehupfumi ndiwo maitiro mashomanana aungada pane bhizinesi rako. Ndinofara, zvishandiso zvakaita se XPath zvinogona kubatsira kubvisa zvose izvi marudzi e data kubva kumawebsite akasiyana, uye vatengesi vekutengesa vanoshandisa iyo kuwedzera mabhizinesi avo uye maitiro ekutengesa. Vanogona kutema mamiriyoni emapeji ewebhu.
5. Dunhu rose mune imwe nzvimbo
Pakupedzisira asi kwete zvishoma, webtraving scraping services inoita kuti zvive nyore kuchengetedza data yose munzvimbo imwe, kuiisa mumashandisirwe anobatsira uye kubatsira vatengesi vekutengesa kuita mabasa akasiyana-siyana zviri nyore. Paunofanirwa kubata nemhando dzakasiyana dzewebhu webhutori, unogona kushandisa zvishandiso sekutumira. io uye inogona kuichengeta mune imwe nheyo yepasi, kuchengetedza nguva yako nesimba uye kukurudzira marashi yako kana chigadzirwa paIndaneti nenzira iri nani. Runako hwekutsvaga webhutano nderokuti ivo vanogadzirisa uye vanokodzera zvinodiwa nevatengi Source .